Ihe Mgbu Industrylọ Ọrụ na Ọdịmma Ngwaahịa - Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd.
Site na echiche nke ahịa carbon carbon zuru ụwa ọnụ, òkè nke ahịa carbon carbon nke mba m na 2019 arịgoro site na 22.8% na 2018 ruo 31.7%, nke na-enye afọ ojuju. Nke a nwere njikọ chiri anya na mbọ nke ụlọ ọrụ iji meziwanye ike dị n'ime ha ma melite ogo ma belata ọnụ ahịa karịa afọ. Site na ọnụahịa, na 2019, n'ihi ụkọ nnukwu ngwa ahịa akwa na ahịa mba ụwa na mmụba na-aga n'ihu nke njikwa njikwa ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ carbon fiber nke mba m, ọnụ ahịa carbon fiber nke mba m na ọnụahịa ngwaahịa mba ụwa abanyewo na mbụ. Ọnọdụ nhazi, nke na-eme ka eriri carbon nke mba m na mbupụ ngwaahịa na ogbe enwere ike. N'iji mgbanwe nke mba m metụtara na mbugharị ụtụ isi mbupụ, ụlọ ọrụ carbon fiber nwere ike ịtụle iji ohere ahụ gbasaa ahịa mba ofesi.
Ihe kachasị mkpa carbon carbon tube bụ eriri carbon. Carbon fiber nwere ume siri ike, ịdị nro na nhazi dị mfe, ọkachasị akụrụngwa ya dị ezigbo mma. Carbon fiber nwere ume dị elu na ịdị arọ. E jiri ya tụnyere eriri ndị ọzọ na-arụ ọrụ dị elu, eriri carbon nwere ike kachasị elu na usoro pụrụ iche.
Otú ọ dị, ime ka eriri fiber carbon buru ibu na dayameta na ogologo ogologo oge abụwo nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ carbon fiber. Nke a bụkwa isi ihe mgbu maka ụlọ ọrụ carbon carbon tube niile. Ọ bụghị naanị na teknụzụ mmepụta ka amachibidoro, mana nwekwara njikọ dị ukwuu na ngwa mmepụta. Iji dozie nsogbu a, ụlọ ọrụ anyị ọ bụghị naanị goro ndị ọkachamara ọkachamara nwere ụgwọ dị elu, kamakwa jiri nnukwu ego iji wuo ngwa ọrụ dị elu. Na-akwalite mmepe nke ụlọ ọrụ carbon fiber.